Shiinaha TDY-Y-1 Ujeeddo badan oo Shaxanka Korantada-Haydarooliga ee Caafimaadka ee soosaarayaasha Shiinaha iyo alaab-qeybiyeyaasha. Wanyu
Saldhigga Y-qaabeeya wuxuu xaqiijiyaa xasilloonida iyo boos ku filan oo lug ah.
Shaqada tarjumaadda iyo loox-ka-fiirinta, oo ku dhegan C-arm, waxay sameyn kartaa baaritaanka raajada jirka oo dhan.
Nidaamka xakamaynta laba-geesoodka ah, marka lagu daro kontoroolka gacanta lagu hago, waxaa lagu qalabeeyaa nidaamka xakamaynta xaaladaha degdegga ah. Hawsha dib-u-dejinta ee hal-fure waxay bixisaa waxtarka shaqada ee dhakhtarka.
Miiskan hawlgalka elektaroonigga ah ee isku dhafan wuxuu ku habboon yahay qalliinno kala duwan, sida qalliinka caloosha, dhalmada, cudurada haweenka, ENT, urolojiga, anorectal iyo orthopedics, iwm.
1.Nidaamka Xakamaynta Labaad
TDY-Y-1 Miiska korantada ee korontada ku shaqeeya wuxuu leeyahay habab xakameyn laba jibaar ah, midna waa koronto-ilaaliye ku xiran, oo leh hal-furaha heerka dib-u-dejinta heer-otomaatig ah. Midda kalena waa nidaamka xakamaynta xaaladaha degdegga ah. Laba nooc oo nidaamyo hawlgal madax-bannaan oo isku shaqo ah ayaa xaqiijinaya in nidaamka xakamaynta xaaladaha degdegga ahi ay weli u shaqeyn karaan si kalsooni leh marka koontaroolka xargaha uu ku guuldareysto, isagoo hubinaya isticmaalka nabdoon ee miiska hawlgalka.
Nidaamka Xakamaynta Labaad
Loo heli karo Sawirka raajada
2.Waa loo heli karaa Sawirka raajada
Jadwalka dusha sare ee miiska korontada-Haydaroolka AMA miiska wuu dhaafi karaa raajada, tareen haga ayaa lagu rakibay hoosta miiska si loo qaado sanduuqyada filimka raajada
3. La jaan qaadi karo C-arm
Maskaxda dhaqdhaqaaqa korantada ee korantada waa 340mm, oo siisa boos sax ah oo ku habboon C-arm, waxayna sameyn kartaa raajo jirka oo dhan ah iyada oo aan la dhaqaajin bukaanka.
4.Bateriyada dib loo soo celin karo
Miiska qalliinka TDY-Y-1 Electric-Hydraulic qalliinka waxaa lagu qalabeeyaa baytariyado dib-u-soo-celin sare leh, kuwaas oo dabooli kara baahiyaha operations50 hawlgallada, iyagoo hubinaya inay shaqeyneyso iyada oo aan la helin koronto dibadda ah. Bateriga dib loo soo celin karo uma baahna dayactir waxaana la isticmaali karaa waqti dheer. Isla mar ahaantaana, awoodda AC waxaa loo isticmaali karaa in lagu bixiyo tamar koronto si loo hubiyo nabadgelyada ugu badan.
5.Obadhanka Reset Fgoynta
Hawsha dib-u-dejinta hal-badhan ee cusub ayaa fududeyneysa howlaha adag
Shayga Qaabka Shaxda TDY-Y-1 Koronto-Haydarooliga
Dherer iyo Ballaaran 1960mm * 500mm
Sare u qaad (kor iyo hoos) 1090mm / 690mm
Saxanka Madaxa (Kor iyo hoos) 60 ° / 85 ° / 0 °
Taabta dhabarka (kor iyo hoos) 85 ° / 40 °
Janjeer dhinaca dambe (Bidix iyo Midig) 18 ° / 18 °
Sare u qaadista Buundada kilyaha 100mm
Gawaarida Gawaarida 340mm
Booska eber Hal badhan, heer
Guddiga Xakamaynta ikhtiyaari ah
Badhanka joojinta degdegga ah Ikhtiyaar
Nidaamka korantada Chaoger oo reer Taiwan ah
SQalabka casriga ah
6 Saxanka Cagta 1 lammaane
7 Kilyaha Buundada 1 gabal
8 Furaashka 1 Deji
9 Hagaajinta haysa 8 qaybood
10 Xakamaynta Remote 1 gabal
12 Saliida Haydarooliga 1 saliid ah
Hore: LEDD730 Saqafka Sare ee Qalitaanka Qalitaanka Kali ah ee Aluminium-Aluminium
Xiga: TDY-1 Shiinaha Miiska Hawlgalka Caafimaadka ee Korontada Korontada ee Isbitaalka
TDY-Y-2 Hospital Qalliinka Qalabka Electro-Hyd ...
TDY-G-1 Radiolucent ahama Steel Electric-Hy ...